प्रसंग विजया दशमी : बलिप्रथा विरुद्द तपाईंको मन हल्लाइदिने बाह्र तर्क
Tuesday, 8 Oct, 2019 8:52 AM
शान्ति र सदभावको पर्व दशैंलाई नेपालमा काटमार र हिंसाको पर्व पनि बनाइने गरेको छ। काटमार र हिंसा गरेर पर्व–उत्सव मनाउने विडम्बनापूर्ण संस्कृति एक्काइसौं सदीको नेपालमा पनि व्याप्त हुनु सबैका लागि लज्जाको विषय भएको छ।
बलि प्रथा र मांसाहार प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। बलि र मांसाहार विरुद्ध १२ तर्क, जसले तपाईको मन हल्लाइदिन्छ :
१.आफ्नै सन्तान मारेर रगत र मासु कसैले खान्छ रु सुन्दा पनि कहालीलाग्ने प्रश्न छ।
मानव तथा पशुपंक्षी सहित जिवात्मालाई देवीदेवताले आफ्नो सन्तान मान्छन्। देवीदेवतालाई हामी माता पिता मान्छौं। तर, देवीदेवताले आफ्नै सन्तानको रगत खान्छन्, सन्तानको रगत खान दिए इच्छा पूरा गरिदिन्छन् भनेर मानिसले पशुपंक्षीको बलि दिन्छन्। यसो गर्नु ठिक हो ? आफै विचार गरौं।
विवेकशील मानिसले बेलाबखत विवेक गुमाउन सक्छ। विवेक गुमाएर नै मानिसले नराम्रो काम गर्छ, अपराध र हिंसा गर्छ, अरुलाई चोट पुराउँछ। अरुको अहित गर्नु पशुतुल्य बन्नु हो। पशु नबनेर विवेकशील मानव बन्न आफ्नो खराब आहार, व्यवहार र विचार त्याग्नु नै बलि दिनु हो। आफ्ना अवगुणलाई बलि चढाउनुको बदला पशुपंक्षीलाई बलि चढाउनु झन खराब हुनु होइन र ? मूर्ख बन्नु होइन र ?
३. जुनसुकै धर्मले हत्याहिंसालाई पाप र अधर्म भन्छ। हिन्दू धर्म तथा यससँग जोडिएका सबै धर्महरुले पनि हत्याहिंसा पाप हो भन्छ। पशुपंक्षीको बलि दिनु हत्या हो, हिंसा हो। अब विचार गरौं– हत्या हिंसा गरेर धर्म कि पाप हुन्छ ? बलि दिएर धर्म हुन्छ भन्नु विश्वाश होइन अन्ध विश्वाश हो।
४.मानिसको नङग्रा हुँदैन, नङ हुन्छ, मानिसको दाँत हुन्छ, दाह्रा हुँदैन। किन ?
किनभने मानिस प्राकृतिक तथा जैविक रुपमा शाकाहारी प्राणी हो। वैज्ञानिक रुपमा निर्विवाद पुष्टि भएको कुरा हो– मानिस प्राकृतिक रुपमा नै शाकाहारी हो। मानिसले आहाराका लागि कसैलाई मार्न आवश्यक नभएकाले दाह्रा र नङग्रा भएन। मांसाहारीले मात्र अरुको हत्या गरेर आहारा जुटाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, मानिसलाई अरुको हत्या गर्ने अधिकार प्रकृतिले दिएको छैन। अरुको हत्या गर्न प्रकृतिले मानवलाई सृष्टि गरेको होइन भने बलि दिनु उपयुक्त हो त ?
पृथ्वीका अधिकांश प्राणी शाकाहारी र मांसाहारी दुई खालका छन्। मानिस मांसाहारी नभएर शाकाहारी हो भन्ने अर्को प्रमाण मानिसको पाचन प्रणाली हो। शाकाहारी र मांसाहारीको फरकफरक पाचन प्रणाली हुन्छ। मानिसको पाचन प्रणाली शाकाहारी वर्गको छ। मानिस मांसाहारी प्राणी हुँदै होइन भने किन बलि दिने ?
५. जिव विकासको क्रममा शाकाहारी प्राणी मांसाहारी र मांसाहारी प्राणी शाकाहारी बनेका छन्। मानिसले मांसाहार गर्न थालेको हजारौंहजार वर्ष भयो, तैपनि मानिसको शारीरिक विकास मांसाहारीको जस्तो किन भएन ? यसको अर्थ प्रकृति र इश्वरले मानिसलाई मांसाहार नै बस्नु भनेर सन्देश दिएको हो। मांसाहारी मानवले बलि दिनु कसरी धर्म हुन्छ ?
६. परापूर्व कालमा मानिसको स्थायी बसोबास थिएन। फिरन्ते जीवनमा आहारका लागि बाध्य भएर पशुपंक्षी पनि खान थाल्यो, पछि मानिसलाई मासु खाने अम्मल लाग्यो। जति खराब चिज छ, त्यो खाने इच्छा त्यति धेरै लाग्छ, अम्मल असल चिजमा हुँदैन, खराब चिजमा हुन्छ। अम्मल लागेपछि मानिसले पशुपंक्षीको हत्या गर्न थाल्यो, हत्याहिंसाले संस्कृति र परम्पराको रुप लियो। मांसाहारलाई वैधानिकता दिन देवीदेवताले बलि मागेको भन्न थालियो। तर, आज मानिस स्थायी बसोबास गर्ने प्राणी भएको छ। अब पनि देवीदेवताले बलि मागेको भन्ने गलत कुरा तपाईं विश्वाश गर्नुहुन्छ ?
७.नेपालमा विशेष गरी दशैंमा धेरै बलि दिइन्छ। परिवार आफन्त भेला हुने, आपसी मायाप्रेम र सदभाव बढाउने पर्व दशैं हो। बलि दिएर रगतको खोला बगाएपछि सदभाव कि दुर्भाव बढ्छ ? परिवार भेला भएर रगतको खोला बगाएर पाप गर्ने कि राम्रो विचार लिएर धर्म गर्ने ? त्यसो भए बलि किन दिने ?
८. युद्धमा सेनाले निर्मम बनेर सत्रुको हत्या गरोस्, नहिच्किचाओस् भनेर व्यारेकमा बलि दिएर रगतको खोला बगाउने चलन थियो। रगतको खोला देखेर सेनामा पनि त्यस्तै भाव जगाएर सत्रुलाई सखाप पार्ने मनोविज्ञान सिर्जना गर्न खोजिन्थ्यो। अहिले पनि ब्यारेकहरुमा बलि दिइन्छ तर युग परिवर्तन भइसक्यो। आमने सामने भएर सेनाले लडाइ गर्ने युग छैन, विश्वको एक कुनामा सानो बटन दबाएको भरमा हजारौं किलोमिटर परको ठाउँ तहसनहस पार्न सकिन्छ। अहिले सेना युद्ध होइन शान्तिका लागि भन्ने विश्वभरि अवधारणा छ। तैपनि सैनिक ब्यारेकमा बलि दिइनु उचित हो त ?
९.आहार अनुसार विचार, विचार अनुसार व्यवहार हुन्छ। हामी जे खान्छौं त्यसैबाट शरीर र विचार बन्ने हो। मारिन लाग्दा भयग्रस्त पशुपंक्षीमा विभिन्न विकार उत्पन्न हुन्छन्। भय त्राश डर र उदासीले पशुपंक्षीको शरीरमा विकृत रसायनहरु पैदा हुन्छन् र मांसाहार गर्दा ती विकार मानव शरीरको हरेक कोषिकामा पुग्छ। मांसाहारका नाममा शरीरमा त्यस्ता विकृत रसायन प्रवेश गराउनु ठिक हो त ? ठिक होइन भने बलि दिनु कसरी ठिक हो ?
१०.बातावरण अनुसार विचार हुन्छ। शान्त स्वच्छ बातावरणमा मानिसको मन पनि त्यस्तै हुन्छ। रगतको खोला बगेको ठाउँमा मानिसको मन पनि विकृत हुन्छ। मन्दिर शान्ति र पवित्रताको थलो हो। त्यस्तो ठाउँमा बलि चढाएर रगतको खोला बगेको देख्दा मानिसको मन शान्त हुन्छ र ? अनि, हिंसाले होइन शान्ति र पवित्र भावनाले मात्र मन्दिरमा देवदेवीले आशिर्वाद दिन्छन् भन्ने विवेकशीले मानिसले बुझ्न पर्दैन र ?
११.दुई किलो मासु उत्पादन गर्न १२–१४ केजी अन्न खर्च गर्नु कत्तिको जाजय हो ? विश्वको बढ्दो जनसंख्यालाई भरणपोषण गर्न अन्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। धेरै कृषि उपज खर्च गरेर थोरै मासु उत्पादन गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले मांसाहारसँग जोडिएको बलिप्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
१२.संसारमा सबैभन्दा ठूलो चिहान कहाँ छ ? मानिसको पेटमा छ। मानिसको पेट हजारौं पशुपंक्षी तथा जिवको चिहान हो। आफ्नो पेटलाई चिहान बनाउने कि फूलवारी ? हरेक विवेकशील मानिसले यो प्रश्न आफैलाई सोध्नुपर्ने भएको छ।
बलि दिँदा अबोध र निरापराध पशुपंक्षीको आत्माले चिच्याएर–कराएर दिएको श्रापले तपाईं हाम्रो आत्मा रुन्छ भने हामी मानव हौं, बलि रोकौं।
बाँच्न पाउने अधिकार हरेक प्राणीलाई छ, तपाई हामी बाँच्न चाहन्छौं, अरुको पनि बाँच्ने इच्छाको सम्मान गरौं।
अब यी दुईमध्ये एक छानौं–
१. अवगुण र खराब विचार–व्यवहारलाई बलि चढाउनु ठिक कि
२. अबोध पशुपंक्षी मारेर बलि दिनु ठिक ?